Ngingazuza kanjani kumasevisi wokuthuthukisa iwebhusayithi?
i-SEO (injini yokusesha injini) yindlela ephumelelayo yokwenza iwebhusayithi ibonakale ku-SERP. Le nkimbinkimbi yezinqubo ezingalungile zokungena kanye nokusekela indawo yenza abanikazi be-site bahloniphe ku-Google, Bing, Yahoo, nezinye izinjini ezifunayo. Ukuphakama kwakho okuphezulu, ithrafikhi eyengeziwe. Ukuhamba kwekhwalithi kusho ukuguqulwa okuphezulu nokuthengisa. Umsebenzisi ohlangenwe nakho obhekene nakho uthola ukusebenza nesayithi lakho, amathuba amaningi lo msebenzisi uzoguqula kuwe ukukhokha ikhasimende. Ngakho, ngokwenza i-intanethi yokusekela injini ye-website, unikezela ngamakhasimende akho inani, futhi ngesikhathi sabo sinikeza inzuzo kuwe. Ukuhlelwa kwe-website yekhwalithi kubandakanya abacwaningi bemakethe, ukuhlolwa kwe-online, ikhwalithi yekhwalithi yekhwalithi, ukuthuthukiswa kwamasu okuqukethwe kanye nokuthola ijusi. Zonke lezi zindlela zenziwa ukwenza amaklayenti angase athole umthombo wakho wewebhu phakathi kwewebhusayithi eyizigidi ezihlobene niche. Ngokusho kwedatha yesibalo, cishe abasebenzisi abangu-90% bachofoza izixhumanisi ekhasini lokuqala le-SERP njengoba bacabanga ukuthi lezi zizinda zihambisana nemibandela yazo futhi zinezinga eliphezulu lagunya. Futhi kunjalo. Ngokusho kwe-Google algorithms, amawebhusayithi ahloniphekile kuphela kanye namawebhusayithi ahloniphekile afanele abe esesimweni sokuqala ekhasini lomphumela. Ngakho ake sixoxe ukuthi yiziphi izinsizakalo zokuthuthukisa ezingahle zithuthukise indawo yethu ye-inthanethi futhi zithole amawebhusayithi ethu ezindaweni eziphezulu ze-Google.
Amasevisi okuthuthukisa i-website
Ukwakha umkhankaso we-SEO wokuwina , udinga ukwazi ukuthi abancintisana bakho bakhula kanjani ibhizinisi labo le-intanethi. Kufanele wazi ukuthi yiziphi izinkampani ezisemakethe yakho yezimakethe ezibhekene namagama angukhiye afanayo futhi ufinyelele amakhasimende akho angakhona. Ngaphezu kwalokho, udinga ukwazi ukuthi yiziphi amaqhinga okusebenza abasebenzisa ukuthuthukisa i-rankings yabo. Kuyithuba elihle kakhulu kuwe ukugxila ezinye izindlela eziwusizo zomkhankaso wakho wokuphromotha. Kudingeka uhlaziye amaphuzu abuthakathaka futhi aqinile omncintiswano wakho ukuze wazi ukuthi ungabakhokhisana kanjani nabo. Isihluthulelo
Enye isevisi enkulu yokwenza umsebenzi we-intanethi yocwaningo lwegama elingukhiye. Kuyinto esemqoka yomkhankaso wakho wokwenza umsebenzi oqondisa zonke izinyathelo zakho ezalandela. Ukuze wakhe umkhankaso we-SEO oyinqola futhi uhlose amakhasimende akho angahle, udinga ukukhomba abasebenzisi abasebenzisa amagama angukhiye angasebenzisa uma befuna imikhiqizo noma amasevisi wakho. Uma uqhuba ucwaningo lwegama elingukhiye wekhwalithi, uzokwazi ukudala ukubuyiswa okuphezulu ekutshalweni kwezimali. Qinisekisa ukuthi amagama akho angukhiye awunamncintiswano omkhulu futhi umsila omude ukukwazi ukuncintisana nabadlali be-SEO abahlala njalo.
Ukwakha isixhumanisi kuyisici esibalulekile ekusebenziseni okungenasayithi. Inombolo yemithombo ekhomba isayithi lakho inquma igunya layo nedumela. Udinga ukuheha izixhumanisi zekhwalithi ukuze uthuthukise isikhundla sakho sewebhu. Qinisekisa ukuthi ufake izixhumanisi zakho ezifanele futhi ezihlobene nezizinda zakho ze-niche. Ngaphezu kwalokho, udinga ukufaka izixhumanisi kokuqukethwe okuyingqayizivele nokubandakanya ukujabulisa abasebenzisi ukulandela isayithi lakho ngolwazi oluthe xaxa. Ukwakhiwa kwekhwalithi kanye nezixhumanisi ezifanele ezivela kwamanye amawebhusayithi kuyinkqubo echitha isikhathi futhi eyinkimbinkimbi edinga umzamo nokubekezela Source .